व्रतमा किन खाइन्छ सिधे नुन ? – live 60media
अन्य फाइदा- पाचन पक्रियाका लागि सबैभन्दा उपयोगी मानिन्छ, सिधे नुन । यसका साथै प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउनका लागि पनि यो नुन उपयोगी हुन्छ । सिधे नुनले हाम्रो शरीरमा इलेक्ट्रोलाइट्सलाई सन्तुलित राख्छ, जसले व्रतको क्रममा हामीलाई उर्जा दिन्छ
सिधे नुनले शरीरमा फ्याट सेल्स कम गर्छ । शरीरको विषाक्त तत्व बाहिर निकाल्छ । सेरोटोनिन र मेलाटोनिन हर्मोनलाई सन्तुलित राख्छ र हाम्रो तनावको स्तर कम गर्छ । साइनस, अस्थमा, आर्थराइटिस र स्टोन जस्तो रोग निको बनाउन समेत सहयोगी मानिन्छ
← यी राशिका व्यक्तिले सुन लगाउँदा मिल्छ लाभ, कुन राशिलाई कुन धातु शुभ ?
छुट्टीमा आएका मनोज जो बिहानै उठेर दुबई जाने तयारीमा थिए तर राति आएको पहिरोले पुरेर मृत्यु भयो ! →